Archive du 20200212
Antoko Teza « Zava-doza ny fisiana antenimiera tsy mahatapa-kevitra ! »
Iarahantsika miaina ny savorovoro isan-karazany mitranga eto amin’ny firenena ankehitriny, hoy ny filohan’ny antoko politika Teza, Jean Louis Rakotoamboa.
Sekretera Jeneralin’ny TIM Nosoloina an’i Rina i Olga Ramalason
Maro ireo tanora mahay sy mahalala ary vonona hijoro sy hamelomaso hatrany ny Antoko TIM ka nosafidiana i Rina Randriamasinoro
Kolonely Faustin Andriambahoaka Namoahan’ny fanjakana IST ihany koa
Namoahan’ny fanjakana didy fandrarana tsy hivoaka ny sisin-tanin’i Madagasikara (IST) ihany koa ny kolonely Faustin Andriambahoaka,
Fanavaozana lisi-pifidianana Zara raha misy 1,5% ny nisoratra anarana
Ny sabotsy 15 febroary izao ny fe-potoana farany fanavaozana isan-taona ny lisi-pifidianana. Hahafahan’ireo feno taona misoratra anarana na mamafa ny anarany ho an’ireo nifindra toerana. 5 andro mialoha ny farany dia zara raha nisy 1,5%
Tetikasa Bas Mangoky Hoditr’akondro ho an’ny filoham-pirenena
Averina hatrany, hoy ny antoko politika Natiora, fa tsy mety ho an’ny Malagasy ny rafitra misy eto Madagasikara ary ny mpitondra teto dia tsy nisy nanana finiavana hanova izany fa nanatanteraka baikom-bazaha hatrany.
Raoul Arizaka Rabekoto Nolavina ny fangatahany, mbola manankery ilay IST
Nolavin’ny filankevi-panjakana omaly talata, ny fangatahan’i Raoul Arizaka Rabekoto ny amin’ny hanafoanana ny tsy fahafahany mivoaka ivelan’i Madagasikara noho ilay IST navoakan’ny fitondrana.
Basket-ball GNBC hiatrika ny BAL Tonga nankahery azy ireo ny FMBB
Tonga nanara-maso ny kotrana sy nankahery ireo mpilalaon'ny GNBC hiatrika ny fifaninanana BAL hanomboka amin'ny tapaky
Rehefa tonga avy any ivelany, dia tokony hitondra voandalana ho an’ny firenena ny filoham-pirenena Malagasy, izay niatrika ny Fivoriana an-tampon’ny Vondrona Afrikanina.
Fanitarana ny seranan-tsambon’i Toamasina Ambenana mandrakariva ny Malagasy sao manao kolikoly
Misy hatrany ny atrikasa hiadiana amin’ny kolikoly manoloana ny fanitarana ny seranan-tsambon’i Toamasina.
Madagasikara Mpizahatany 378 000 no tonga tamin’ny 2019
Raha ny taona 2008 no tsara indrindra ny tarehimarika tamin’ireo mpizahatany nitsidika an’i Madagasikara,
International Tourism Fair Madagascar 2020 Hanamora ny fahatrarana ny tanjona
Hampirisika ny rehetra hisehatra amin’ny fizahantany no antom-pisian’ny hetsika fampirantiana International Tourism Fair Madagascar (ITM).
Fiatrehana ny fiovaovan’ny toetr’andro Voarafitra ny paikady nasionaly eto Madagasikara
Anisan’ny firenena efa nahavita ny drafitrasa momba ny fiatrehana fiovaovan’ny toetr’andro i Madagasikara.
Coronavirus Sinoa 9 sy Malagasy 8 arahi-maso eny Anosiala
Sinoa 9 sy teratany Malagasy 8 no arahi-maso fatratra eny amin’ny Hopitaly CHU Anosiala Ambohidratrimo amin’izao fotoana izao noho ny fahamailoana sy fisorohana ny mety hidiran’ny Coronavirus eto
Resaka “Tandra” tanaty kabary Afaka madiodio i José
Nivoaka omaly ny didim-pitsarana mikasika ilay mpitsara nitory an-dRaharison José William, mpikabary mikasika ilay resaka tandra
Tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika 4,9 % ny tahan'ny eny amin'ny faritra iva
4,9% ny tahan'ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika any amin'ireo faritra iva manodidina an'Antohomadinika, araka ny fanadihadiana
Trangam-piarahamonina Saika novonoin’ilay tovolahy ny reniny
Betsaka ireo karazana tranga mampalahelo sady mampatahotra miseho eny anivon’ny fiarahamonina eny.
Ambato Boeny Atahorana ny tsy fanjarian-tsakafo mahazo ny ankizy
Atahorana ny tsy fanjarian-tsakafo mety hihatra amin’ireo ankizy latsaky ny 5 taona amin’ny distrikan’ Ambatoboeny, taorian’ilay ora-mikija teto amintsika nandritra ny herinandro.
MPISOLOKY MENAKA VANILA Naiditra am-ponja vonjimaika izy 4 mianadahy
Miseho amin’ny endrika maro ny fisolokiana ankehitriny. Ankoatra ny resa-bola dia efa tonga any amin’ny menaka ihany koa izany ankehitriny.
LEHILAHY MAMONO TENA Atosiky ny fitiavan-tena, hoy ny mpandinika fiarahamonina
Betsaka ireo lehilahy namono tena tato ho ato. Misy ireo mihinana poizina dia tsy mifoha intsony ….
Kaominin’i Tanjombato « Hojerena ny fahafaha-mihary ao an-toerana. »
Mila ampatsiahivina fa faritra itobiana indostria maro i Tanjombato, hoy ny ben’ny tanàna ao an-toerana, Tovo Rakotojohary,